Accueil > Gazetin'ny nosy > Mahafaly Olivier Solonandrasana: Namoahan’i Mavoloha « Notam » ?
Mahafaly Olivier Solonandrasana: Namoahan’i Mavoloha « Notam » ?
Mitohy ny fiparitahan’ny feo izay mampibaribary ny olana anatiny eo amin’ny samy mpitondra fanjakana ambony. Mazava ny fisehony fa ny filohampirenena mivady no efa tapa-kevitra hanaisotra ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier amin’ny toerany. Ny antony nandehanan’Ingahy Praiminisitra any ivelany dia efa mampibaribary ny tsy fitovian-kevitra eo amin’izy telo mianadahy lehiben’ny fahefana mpanatanteraka, dia ny filoha mivady, andaniny, ary ny praiminisitra, ankilany.
Ny Praiminisitra tokoa mantsy ny tolakandron’ny alahady teo, talohan’ny niaingany teto an-tanindrazana, dia nanipika ny anton-diany fa hanao fizaham-pahasalamana. Ny filohampirenena Rajaonarimampianina anefa dia namoaka didim-panjakana mihitsy ny alatsinainy ka nanendry an-dRamanantsoa Benjamina Ramarcel ho praiminisitra mpisolo toerana. Tsy misy fetrany io fa hoe « mandritra ny tsy maha-eto an-toerana ny praiminisitra, izay namita iraka any ivelany ».
Dia ho azo inoana ve fa na nandainga aza ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana tamin’ny alahady teo anoloan’ny mpanao gazety tamin’izy nilaza fa « handeha hanao fizaham-pahasalamana », dia tsy ho ren’ny filohampirenena ka ho nahatonga azy namoaka indray fa « lasa namita iraka ny praiminisitra » ?
Na nandainga aza mantsy ny praiminisitra dia azon’ny filohampirenena natao mihitsy ny nifanafin-kiho taminy ka nanamafy fotsiny an’io hoe lasa nanao fizaham-pahasalamana io fa tsy ny mifanohitra amin’izany.
Etsy ankilany, isan’ny manaitra ny maro ny fanamafisana ny fiarovana ny lapan’ny praiminisitra eny Mahazoarivo taorian’ny nandehanan’ny Praiminisitra Mahafaly Olivier niampita ranomasina. Inona no dikan’izany ? Hosakanana tsy mahazo miditra eny Mahazoarivo intsony ve ny Praiminisitra rehefa tavaferina an-tanindrazana ? Raha ny tokony ho izy dia anio alakamisy izy no miverina. Ny vaovao re alina anefa dia toa namoahan’ny eny Mavoloha didy tsy mahazo miverina eto an-tanindrazana ity Praiminisitra lehiben’ny governemanta ity. Io ilay antsoina matetika hoe « Notam ». Nihatra tamin’i Pierrot Rajaonarivelo io tamin’ny fitondrana Ravalomanana, ary nianjady tamin-dRavalomanana koa tamin’ny fitondrana tetezamita.
Iza indray izany no tena tompon-kevitra tamin’io « Notam » io ? Tamin’ny fitondrana tetezamita dia niaraha-nahita fa isan’ny nafana fo sy tsy nanaiky lembenana tamin’io « Notam » nanakanana an-dRavalomanana tsy ho tafiditra teto Madagasaikara io i Harry Laurent Rahajason Rolly Mercia, minisitra ny Fifandriasana tamin’izany, ka ankehitriny, mbola izy ihany ve no ao an-damosin’io « Notam » isakanana an’i Mahafaly Olivier Solonandrasana tsy ho tafody an-tanindrazana io ? Hatramin’ilay didim-panjakana nanendren’i Hery Rajaonarimampianina ho praiminisitra mpisolo toerana vonjimaika an’i Benjamina Ramanantsoa Ramarcel no ahenoana ny ako hoe « tao an-damosina tao i Rolly Mercia ».